I-facer ephindwe kabili
Kuqondile futhi kuvundlile
Umugqa Wokukhiqizwa Kwamakhadibhodi Okhiqiziwe
UKUHLULEKA OKUJWAYELEKILE KANYE NOKUHLAWULWA KWEBHODI LOKUKHIPHA IBHODI （2）
Okwesithathu, i-warpage 1. I-Warpage ihlukaniswe yaba: ukugoba okuvundlile kuya phansi, ukugoba phezulu phezulu, ukugoba ubude obude phezulu, ukugoba okubheke ezansi, ukugoba okumise okwe-S, ukugoba okubili. 2. Izingozi ezidalwa ukusonteka: ① Ngemuva komshini webhodi lukathayela ukusika, iphepha alikwazi ukuzenzakalela ...
UKUHLULEKA OKUJWAYELEKILE KANYE NOKUHLAWULWA KWEBHODI LOKUKHIPHA IBHODI
1. Ukunamathela okungekuhle (i-glue evulekile, i-glue eyimbumbulu) Lokhu kusebenza: ngemuva kokunamathela kokuqala kwekhadibhodi imizuzu engu-5, ngaphansi kwesenzo samandla angaphandle, ingaphakathi, ingaphezulu noma amathayili we-A, B noma isemishi lihlukaniswe ngokuphelele , futhi yonke imicu yamaphepha iqinile, ayishaywanga, futhi ...
Ukwehluleka okuvamile nezinyathelo zokuphikisa umugqa wokukhiqiza webhodi lukathayela
Ulwazi oluhlobene nomkhakha wemishini yokupakisha ibhokisi
Iphepha lenziwe ngokhuni, uginindela, notshani obuqukethe izinto ezahlukahlukene zefayibha. Ubukhulu bephepha elikhiqizwa isigayo sephepha, noma elakhelwe ephepheni nasekhadibhodini. Kepha ulayini awuqinile. Ngokuvamile, isisindo sesisekelo singaphansi kuka-200 g / m noma ngaphansi kuka-0.1 mm ubukhulu. Ikholomu ...
lukathayela ibhokisi okwenza umshini / Single facer umshini
Umshini ohlangothini olulodwa uqukethe umnikazi wokugoqa kanye nomshini wokwakha uthayela ohlangothini olulodwa. Okokuqala, iphepha eliwumgogodla liyashiswa, bese kusetshenziswa umqulu lukathayela ukwakha isimo sikathayela esidingekayo. Ekugcineni, i-glue (isitashi esinamathelayo) sisetshenziswa esiqongweni sikathayela nakuma-combi ...
Sekuyiminyaka eminingi, ngenxa yekhwalithi ephezulu yemikhiqizo yenkampani yami, Amakhasimende amaningi akhethe imikhiqizo yethu, Phakathi kwawo kukhona amaklayenti avela eTurkmenistan, Bathenga umugqa womkhiqizo wamakhadibhodi lukathayela wohlobo lwe-1800, Ususebenze iminyaka emithathu, i-Customer Feedba. ..
Iba nethimba elinamandla ngemuva kokuthengisa, ukulungisa iphutha lemishini yesikhathi eside nokugcinwa kulo lonke izwe
[Incazelo efingqiwe] I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.iseningizimu yenhlokodolobha iBeijing nasenyakatho neJinan. Inokuthuthwa kwamanzi namhlaba okulula kakhulu. Kuyinto ibhizinisi professional nge ngezinga elikhulu ukukhiqizwa ibhokisi ibhokisi imishini kanye pr ...
Ubuchwepheshe | Isamba se-crux yokulahleka kwebhokisi kanye nezinyathelo zokwenza ngcono.
Ukulahleka kwamabhizinisi amakhathoni kuyisici esikhulu esithinta izindleko. Uma ukulahleka kulawulwa, kungakhuphula ukusebenza kwebhizinisi ngezinga elikhulu futhi kuthuthukise ukuncintisana kwemikhiqizo. Ake sihlaziye ukulahleka okuhlukahlukene kwemboni yamabhokisi. Ukukubeka nje, i-t ...
Bheka ukuthi kungani ukuphakama kwamakhadibhodi kuguquka.
Uma kukhulunywa ngokushoda kwamakhadibhodi kathayela, abantu abaningi bazocabanga ngekhadibhodi likathayela. Eqinisweni, lesi simo asifani nokuguqulwa. Kunconywa ukuthi uphenye kusuka ezicini eziningana ezifana nezinto zokusetshenziswa, imishini yethayela eyodwa, ama-flyovers, imishini yokunamathisela, amabhande wokuhambisa, i-p ...
I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacture Co., Ltd.
I-3km eningizimu yedolobha i-dongguang County empumalanga yomgwaqo omkhulu kazwelonke we-104